Mampihataka Ireo Vondrom-pivavahana Ho Ivelan’ny Lalàna Ny Mpanjaka Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2014 14:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, عربي, polski, English
Namoaka didim-panjaka manendry sazy an-tranomaizina hoan'ireo Saodiana miady ivelan'ny firenena sy hoan'ireo “mpikambana amin'ny vondrom-pivavahana sady mahery fihetsika” ny mpanjakan'i Arabia Saodita Abdallah. Niteraka fanehoan-kevitra isan-karazany tao amin'ny tambajotra fampahalalam-baovao an'olo-tsotra izany didim-panjakana.
Saodiana an'arivony no nanatevin-daharana ny ady an-trano tao Syria, anisan'izany ireo tanora mpiady, ka niadi-hevitra mikasika izay tokony omena tsiny ny fampahalalam-baovao Saodiana. Nilatsaka ihany koa ny didy taorian'ny fanambaran'i Ejypta fa vondrona mpampihorohoro ny Mpirahalahy Miozolomana.
Sampam-pahalalam-baovaom-panjakana Saodiana nitatitra hoe:
Na iza na iza mandray anjara na voasaringotra ao anaty ady ivelan'ny Fanjakana na manatevin-daharana vondrom-pivavahana sy vondrom-pandinihana mahery fihetsika, dia ho voasazy tsy latsaky ny telo taona ary tsy mihoatra ny roapolo taona an-tranomaizina. Na dia izany aza, hitombo tsy latsaky dimy taona ary tsy mihoatra ny telopolo an-tranomaizina ny sazy hoan'ireo mpitandro ny filaminana, hoy ny didihitsivolan'ny mpanjaka nilaza androany.
Na dia izany aza, tsy nambaran'ilay didihitsivolana arabo hoe “vondro-pivavahana mahery fihetsika” fa “mpivavaka sy mahery fihetsika”, izay niteraka tsikera tamin'ny fiteny tsy mazava ampiasainy. Nanomboka nampiasa diezy Twitter ireo mpiserasera: “Mampihataka ny vondrona mpirahalahy Miozolomana ho tsy ara-dalàn ny mpanjaka Abdallah.”
Mpianatra ambony momba ny siansa politika, Khalid al-Dekhayel nilaza fa tena mampihataka ny Mpirahalahy Miozolomana ho tsy ara-dalàna ny didihitsivolana:
Mampiditra ny Mpirahalahy Miozolomana ho “antokom-pivavahana na ireo izay ambara fa mpampihorohoro ao amin'ny firenena, faritra na manerantany” ny famaritana rehefa nolazain'i Ejipta fa izany izy io.
Mpisera Twitter Saodiana Sultan al-Fifi nanamarika ny amin'ny fifanoheran-kevitra tamin'ny filazana ny lalàna Sharia ho fandraràna ireo vondrom-pivavahana:
Ho fiankinantsika amin'ny fampiharana ny Sharia Islamika, homelohintsika ireo izay miaraka amin'ny Mpirahalahy miozolomana ka mampiasa ny fivavahana hahazoana tombontsoa politika.
Mpisera Twitter Abdullah al-Awlah, namoaka lohatenin-gazety tamin'ny taona 1960, raha nanohana ireo mpirahalahy miozolomana i Arabia Saodita izay manohitra ny fitondrana nasionalista notantanin'i Gamal Abdel Nasser tao Ejypta. Hoy ny vakin'ny lohateny: “Printsy Fayçal: nitolona ho fiarovana an'i Allah tamin'ny fanahiny sy ny volan'izy ireo ny mpirahalahy miozolomana.”
Midika izany fa izay olona milaza izany dia ho voasazy.